विश्वसम्पदा क्षेत्रमा ६ सय संरचना मापदण्डविपरीत « News of Nepal
काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सात विश्वसम्पदा स्थलमा ५ सय ९९ संरचना मापदण्ड विपरीत बनेको पाइएको छ। तीमध्ये अधिकांश निजी घर रहेका छन्। पुरातत्व विभाग विश्वसम्पदा संरक्षण शाखा प्रमुख डा. सुरेशसुरश श्रेष्ठका अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा बढी भक्तपुर दरबारक्षेत्रमा रहेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका सम्पदा महाशाखाका निर्देशक रामबहादुर थापाले अब नयाँ रणनीति ल्याएर नियमविपरीत बनेका घरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
विश्वसम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना हेर्ने जिम्मा पुरातत्वको र भवन निर्माण सम्पन्न दिने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले केही समस्या देखिएको छ। विभागका विश्वसम्पदा शाखा प्रमुख डा. श्रेष्ठले मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका अधिकांश संरचना कारबाहीमा परेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैले अहिले उनीहरूले न घर बिक्री गर्न सकेका छन्, न त धितो राखेर ऋण लिन नै। मापदण्ड विपरीत निर्माण गरेका ती संरचनामा भाडामा दिनेमात्र काम भइरहेको छ।
सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनाको मापदण्ड हेरी कारबाही गर्न विभागसहितको प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समिति रहने व्यवस्था छ।
सो समितिले मापदण्ड निर्माण सम्पन्न लिनुअघि मापदण्ड अनुसार भए–नभएको विषयमा स्थलगत निर्णय गर्ने गरेको छ।
विश्वसम्पदा क्षेत्रभित्र निर्माण हुने घरको उचाई ३५ फिट, र कोठाको उचाइ ८ फिट हुनुपर्ने, परम्परागत सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने, घरको झ्याल ढोका परम्परागत शैलीको बुट्टेदार काठबाट बनेको हुनुपर्ने, माथिल्लो भागमा पूर्णरूपले छोप्न नहुने लगायतका मापदण्ड छन्। विश्वसम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएको घरले सामान्य प्रक्रिया पूरा नगरेपनि मापदण्ड विपरित हुने विभागको भनाई छ। विभागले निवेदन आएका मध्य केहीलाई भत्काएर पुननिर्माण गर्न लगाएको छ।
सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनालाई २०७२ सालको भुकम्पले भत्काएपछि पुनःनिर्माण गरिएका संरचना मापदण्ड अनुसार नै हुने गरेको डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो। युनेस्कोले काठमाडौं उपत्यकाको सात र लुम्बिनी गरी दुई सांस्कृतिक, सगरमाथा र चितवन गरीदुई प्राकृतिक क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको छ।